Iikhonsepthi zokuqala ze-iPhone XI ziqala ukuvela | IPhone iindaba
Ingelosi Gonzalez | | iPhone X
Iingxelo nge Isizukulwana esilandelayo se-iPhone X iyatsha. Baninzi abahlalutyi abaqikelela ukuba esi sigxina sineentsuku zaso zibaliwe ngokwemveliso kuba ibango belinokuwa kwaye uApple ukhetha ukutyala imali Yila isiphelo sendlela esilandelayo, yintoni enokubizwa IPhone XI.
Kule ngcamango epapashiweyo sibona i-terminal efana ne-iPhone X kodwa nge notch encinci kunye nokunciphisa i-bezels esecaleni oko kuya kuthetha ukonyuka okuncinci kwiscreen se-OLED. Ukongeza, siyabona ukuba esi sizukulwana sitsha sinokuba nayo njani itreyi yokufaka iiSIM ezimbini. Sikubonisa emva kokutsiba.
I-iPhone XI: isikrini esithe kratya, itekhnoloji engcono kodwa uyilo olufanayo
Iikhonsepthi malunga nokuba i-iPhone elandelayo ye-Apple inokubonakala ngathi iqala ukuvela, nangona kungekudala. Inkqubo ye- isizukulwana sesibini yesiphelo X ingabizwa i-iPhone XI, okanye ubuncinci eso sisihloko Iindaba zeDrop ingcinga yakho. Nangona kusekho indlela ende yokuhamba ukubona izixhobo ezintsha, amarhe kunye neengxelo ezipapashwe ziinkampani zabahlalutyi zibonisa ingaba yeyiphi indlela yeApple.
Kule meko ungabona i- ukunciphisa inotshi Kungenxa yokuba ikhamera enobunzulu bokwenyani iyinciphisile indawo yayo evumela ukuba nendawo ethe kratya yepaneli ye-OLED. Ukongeza, ukwanda koku akuveli kuphela kunciphiso lwenotshi yasentsomini, kodwa kukonyuka ngokuba ukunciphisa i-bezels kwicala lesixhobo.
Bayathetha malunga nokubanakho ukudibanisa i-ID yesazisi kwakhona nangona inyanisekileyo Ndicinga ukuba asizukuphinda simbone kwizixhobo ezilandelayo ze-Apple emva kokuqinisekisa ukuba yinkqubo elungileyo yokhuseleko. Ukongeza, kubalulekile ukukhumbula ukuba iingxelo zamva nje zibonisa ukuba singazibona izixhobo ezitsha ezine ngokuphela konyaka:
I-5,8 intshi ye-iPhone enesikrini se-OLED
I-6,5 intshi ye-iPhone enesikrini se-OLED
I-iPhone ye-6.1-intshi enesikrini seLCD
I-iPhone SE okanye efanayo noyilo olufana ne-X yangoku
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iifowuni zePhone » iPhone X » Iikhonsepthi zokuqala ze-iPhone XI ziqala ukuvela
ukunciphisa? Into ekufuneka beyenzile kukususa.
I-Apple ibandakanya imiyalezo kwi-iCloud kwi-iOS 11.3